कर्णालीका ३८ पालिकाको नतिजा: कुन दलले कति पालिकामा लियो नेतृत्व? :: दिपकजंग शाही :: Setopati
कर्णालीका ३८ पालिकाको नतिजा: कुन दलले कति पालिकामा लियो नेतृत्व?
कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये हालसम्म ३८ पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नतिजा सार्वजनिक भएका पालिकामध्ये सबभन्दा धेरै पालिकामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ।
कांग्रेसले ३८ मध्ये १८ वटा पालिकाको नेतृत्व लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले १९ पालिकामा नेतृत्व लिएको छ। नेकपा एमालेले ५, समाजवादीले ३ पालिकाको नेतृत्व लिएका छन्।
३८ मध्ये २ पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेवार प्रमुख/अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका नतिजा सार्वजनिक भएका पालिकाहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले १८ पालिकामा नेतृत्व लिएको छ।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका कर्णबहादुर रावलत अध्यक्ष र माओवादीका ज्ञानबहादुर सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्।
डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकामा कांग्रेसका स्वर्णबहादुर बुढा मेयर र छिरिङ टोल्मा महत उपमेयर निर्वाचित भएका छन्।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा कांग्रेसका लक्ष्मणबहादुर शाही अध्यक्ष र सुर्पना शाही उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा कांग्रेसका दामोदरप्रसाद आचार्य अध्यक्ष र प्रेमकली बुढा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। पातारासी गाउँपालिकामा काँग्रेसका पूर्णसिंगे बोहोरा अध्यक्ष र जनमाया रोकाया उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा शंकरप्रसाद उपाध्याय मेयर र महेन्द्रबहादुर शाही उपमेयरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा कांग्रेसका हरिचन्द बस्नेत पुनः अध्यक्षमा दोहोरिएका छन् भने देवीकुमारी सिंह उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन्।
शिवालय गाउँपालिकामा शेरबहादुर शाही अध्यक्षमा र गीता शाही नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
रूकुम पश्चिमको बाँफेकोट गाउँपालिकामा कांग्रेसका जनककुमार बाठामगर अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका तारा बुढा केसी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका मानबहादुर बुढाथोकी अध्यक्ष एमालेका लालबहादुर रावत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा कांग्रेसका भरत गिरी र माओवादीका रामबहादुर बस्नेत उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकामा कांग्रेसका खेमबहादुर रावत र सीता खड्का पुन: उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
शारदा नगरपालिकामा प्रमुखमा प्रकाश भण्डारी र उपप्रमुखमा सुस्मिता सापकोटा सुनार निर्वाचित भएका छन्।
दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा लक्ष्मण गुरूङ र मञ्जुकुमारी शर्मा उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्।
भैरवी गाउँपालिकामा कांग्रेसका रिताकुमारी शाही अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा देवी भण्डारी निर्वाचित भएका छन्।
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा गणेशकुमार शाही प्रमुख र मनसराकुमारी शर्मा उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्।
ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा अध्यक्षमा कांग्रेसका रक्षबहादुर शाह र उपाध्यक्षमा देवीराम बडुवाल निर्वाचित भएका छन्।
मुगुको मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा छिरीङ क्यान्पे लामा अध्यक्ष र छिरिङ पुटी लामा उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले १० वटा पालिकामा जितेको छ।
हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका लालकेश जैशी र उपाध्यक्षमा सुरेन्द्रबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन्।
नाम्खा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीको प्रेमबहादुर लामा र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका तकदीर लामा निर्वाचित भएका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका विजय भण्डारी र कांग्रेसका सुशिला भाम रोकाया उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका नारासिं रोकाया र उपाध्यक्षमा अमरिता बोहोरा निर्वाचित भएका छन्।
मुड्केचुला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका दत्तबहादुर शाही र उपाध्यक्षमा दुधा रोकाया निर्वाचित भएका छन्।
जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका पूर्णप्रसाद धिताल र उपाध्यक्षमा सितली रोकाया निर्वाचित भएका छन्।
कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीका विष्णुबहादुर रोकाय र उपाध्यक्षमा अलैपुरा जैसी निर्वाचित भएका छन्।
रूकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका विर्खबहादुर विष्ट र उपाध्यक्षमा कमला रोका पुन निर्वाचित भएका छन्।
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका गणेशबहादुर थापा र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका मिनाकुमारी खड्का निर्वाचित भएका छन् भने नौमुले गाउँपालिकामा माओवादीका छविराम सुवेदी उपाध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गंगबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका नतिजा आएका ३८ पालिकामध्ये नेकपा एमालेले पाँच वटा पालिकामा नेतृत्व लिएको छ।
डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका धावा सम्डुक लामा निर्विरोध भएका छन् भने स्वतन्त्रबाट उठेका पेम्मा वाङछेन गुरूङ निर्वाचित भएका छन्।
जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा एमालेका बेदबहादुर शाही अध्यक्षमा र कांग्रेसका वीरेन्द्रबहादुर शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा एमालेका टोपबहादुर विसी अध्यक्ष र शिवाकुमारी खड्का उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्।
डुंगेश्वर गाउँपालिकामा सुन्दरकुमार केसी र कलावती न्यौपाने, नारायण नगरपालिकाको प्रमुखमा लोमन शर्मा र तप्ताकुमारी थापा पनि एमालेबाट निर्वाचित भएका छन्।
यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन वटा पालिकामा जितेको छ। तीमध्ये दुइटामा निर्विरोध भएका हुन्।
डोल्पाका छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका सेनाङ गुरूङ र उपाध्यक्षमा एमालेका कर्मढुण्डुप लामा निर्विरोध भएका छन्।
काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समाजवादीका अंगदकुमार राना र कांग्रेसका निमा बुढा निर्विरोध भएका छन्।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा समाजवादीका दुर्गाबहादुर पुन र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका प्रकाश भरारी निर्वाचित भएका हुन्।
कर्णालीमा दुई जनाले स्वतन्त्रबाट पालिकाको नेतृत्व लिएका छन्।
कालीकोटको सन्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा मोहनबहादुर केसी स्वतन्त्रबाट जितेका छन् भने एमालेका पार्वती सिंहले उपाध्यक्ष जितेकी छन्।
खाँडाचक्र नगरपालिकामा पनि कमलबहादुर शाहीले स्वतन्त्रबाट मेयर जितेका छन् भने माओवादीका गणेशकुमार कार्कीले उपमेयर जितेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ३, २०७९, ०५:१०:००